WMV bụ a Miscrosoft Media Video atụmatụ elu definition mma. Dị ka a Mac onye ọrụ, i nwere ike na-echekarị na isi na-awa obibi WMV format, gụnyere edezi ha na Final Cut Pro. Ọ bụ ezie na Final Cut Pro-abịa a kemfe ngwá ọrụ na a dịgasị iche iche nke jụụ atụmatụ ma na-akwado ihe ọ bụla QuickTime dakọtara video format gụnyere DV, HDV, P2 MXF (DVCProHD), XDCAM na 2K film formats, ma ọ dị nnọọ Ewezuga ihe i nwere ugbu a - WMV faịlụ.
Luckily, i nwere ike iji a WMV ka Final Cut Pro Ntụgharị iji tọghata WMV ka Final Cut Pro dakọtara formats. Dị na-agụ site isiokwu n'okpuru iji nweta gị mma WMV ka Final Cut Pro video Ntụgharị.
Nkebi nke 1: Nweta Best & Professional WMV ka Final Cut Pro Ntụgharị
Part 2: Free WMV ka Final Cut Pro Ntụgharị
Nkebi nke 3: Online WMV ka Final Cut Pro Ntụgharị
Professional Video Ntụgharị: tọghata videos ọtụtụ formats dị ka AVI, MKV, MOV, MP4, na ndị ọzọ.
Otutu atọrọ atọ: tọghata videos ozugbo na Final Cut Pro, iMovie, iPhone, iPad, ect na kachasị presets.
Kasị Video Ntụgharị: Ọ atọghata videos na a ibelata ọsọ, 30X ngwa ngwa ọsọ karịa ndị ọzọ.
Best DVD burner: tọghata videos ọ bụla usoro DVD na ọtụtụ na-akpali DVD menu ndebiri.
Olee otú Ntụgharị WMV ka FCP
1. Tinye WMV faịlụ
Nke a na usoro-enye a Media Nchọgharị jikwaa gị Obodo mgbasa ozi faịlụ. Click, ọ ga-egosi a media nchọgharị window .I nwere ike ngwa ngwa chọta gị isi iyi videos na mgbe ahụ ịdọrọ na dobe ha kpọmkwem n'ime isi omume window.
Mgbe ị mbubata niile WMV faịlụ, ha ga-egosi dị ka thumbnails. Ọ bụrụ na ọ dị mkpa, i nwere ike ịgbanwe faịlụ aha, nwee nkwụnye na sobtaitel, ma ọ bụ jikota ha n'ime nnukwu faịlụ.
2. Họrọ gị chọrọ mmepụta format
Pịa na ala format icon ikpughe mmepụta panel. Ebe a, ị nwere ike mbupụ gị WMV fiiles iche iche video na ọdịyo formats. Na nke kacha mma video àgwà Final Cut Pro, a Video Converter Ultimate for Mac enye abụọ kachasị nhọrọ: 1) ahazi presets maka FCP. 2) Native codecs dị ka ProRes, Apple Intermediate Codec maka FCP. Iji nweta ha, dị nnọọ họrọ edezi Atiya na-aga n'ihi na nhọrọ.
3. Malite WMV ka FCP akakabarede na Mac
Ugbu a ị na-abịa ikpeazụ nzọụkwụ: mgbachapụ WMV ka FCP akakabarede na Mac site see tọghata bọtịnụ. N'oge akakabarede, i nwere ike dị na-ahapụ ya na ndabere na-elekọta ihe ndị ọzọ.
Mgbe ọ gụchara WMV ka ikpeazụ ịkpụ pro akakabarede, ị nwere ike mfe mbubata ma ọ bụ tinye mmepụta videos ka Final Cut Pro. Ya mere enwe edezi window media video na Final Cut Pro.
Part 2: Free WMV ka Final Cut Pro Ntụgharị &
# 1. Free WMV ka Final Cut Pro Video Ntụgharị: Wondershare Video Converter Free
Ị nwere ike iji free WMV ka Final Cut Pro Ntụgharị iji tọghata videos enweghị watermark. Ọ na-akwado converting ka Final Cut Pro, iMovie, ProRes, iPhone, iPad, gam akporo igwe, wdg na kachasị presets. Ọzọkwa ị nwere ike ịtọ mmepụta formats dị ka AVI, MKV, MP4, MOV, na ndị ọzọ.
Cons: The video mmepụta àgwà bụghị dị ka ihe ọma dị ka Video Converter Ultimate. Na kwa ya enwereghị ụfọdụ n'ime Video Converter Ultimates si ọrụ, dị ka ọkụ video ka DVD.
Olee otú Play WMV na android ekwentị
Olee otú Tinye Aha na Final Cut Pro X
> Resource> FCP> Bubata WMV ka Final Cut Pro na Best Ogo